Indlu yelizwe ekhululekile yalungiswa ngo-2019
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguArkadiusz
Indlu yasefama ukusuka ngo-1905 eKurpie, evuselelwe ngo-2019, ibuyiselwe kwisitayile somntu osisityebi ukusuka kwisikhumbuzo seminyaka engama-20. Iikhitshi ezinethayile ezisebenza ngokupheleleyo. Ifenitshala enesitayile, inxalenye yefenitshala yokuqala ye-Art Nouveau. Ikhitshi langoku elisebenza ngokupheleleyo, elenzelwe ixesha lemfazwe. Igumbi lokuhlambela elineshawa.
Ipropathi ibekwe kumda welali, ecaleni kwehlathi. Indawo ebiyelweyo inendawo yokosa inyama, itafile egqunyiweyo enezitulo, indlu yangasese yangaphandle kunye nesakhiwo esiluncedo.
Uxolo noxolo, ipropathi ekupheleni kwelali, kanye ecaleni kwehlathi. Umlambo we-bug 800 yeemitha, ukuloba, amahashe, ukuqasha amaphenyane. 300 yeemitha eNadburzański Landscape Park. Iimitha ezili-1500 zokuGcina iintaka zasemanzini. Iimitha ezingama-500 zoMlambo iBug ngasemva kunye namadlelo asendle. Ivenkile yelali 500 yeemitha. Indawo yokutyela ekufutshane ikumgama oziikhilomitha ezi-6.
Ilali yaseSzumin imi kufutshane nomlambo omdala weBug. Kwidolophana kukho isebe leMyuziyam yoBugcisa banamhlanje-iNdlu yeHansen. Indawo entle ngokumalunga nokhenketho kunye nokuloba. Izinto ezininzi ezinomtsalane: ukukhwela iphenyane kumlambo iBug, ukukhwela ihashe, ibhola yepeyinti, iindlela zebhayisekile. Amahlathi amakhowa agqibeleleyo: iBiała kunye neKamieniecka Forests - zithathwa njengezona zibalaseleyo kwindawo yaseWarsaw. Iidolophana zaseSzumin naseWywłoka zichazwa njengeyona ndawo intle yaseMazovia. Ugcino "Jegiel" - "i-Białowieża encinci" ikude neemitha ezingama-400. Ilali yaseSzumin iyinxalenye yeNadburzański Landscape Park. Iindawo ezinomdla: iRope Park eBrok, iPalace Folwark kunye neSpa e Łochów, iNeo-Gothic Palace eStarejwsi, iDolina Liwiec, iBagno Łopianskie kunye neFidest entlango - ilungele ukubukela iintaka, iMyuziyam yaseGwizdka eGwizdały, Julin / Kaliska estate of Ignacyw Packay, D. , Ossoliński Palace.
Umbuki zindwendwe ngu- Arkadiusz